Naannoo - BBC News Afaan Oromoo
Biyyoonni fayyadama feestaalii ugguran maalitti jiru?
Biyyoonni fayyadama feestaalii ugguran maalitti jiru? Seerichi hojiirra oolaa jiraa?
Dhukkuboota rakkoo jijjiirama qilleensaan daddarban kanneen xiyyeeffannaa hin arganne keessaa tokko dhibeen hooqxoo 'dhibee gadadoo' jedhamuun beekama.
Bosonni Shakkaa Naannolee Uummatoota Kibbaafi Oromiyaa gidduutti argamu dammaafi buna uumamaan badhaadhaa ta'e ibiddaan manca'aa jira.
Haramaan imboocci ammallee Haroo Xaanaaf yaaddoodha
Yaaliin taasifamaa jiraatulleen haramaa 'Imboocci, akka biyyaa alaatii galee amanamuu, waggoota dhiyoo asitti baballachuun Haroo Xaanaa dhaaluuf yaaddoo cimaa uumeera. Haramicha dhabamsiisuufis carraqqiiwwan tasifamanis jijjiiramni guddaan akka hin galmaa'iin dubbatama.
Muki bulchiinsa pireezidaantoota 39 dabarse yeroo Tiraampitti sababa dullumaatiin muramuufi
Dhangala'aan boba'aa Naayijeriyaatti daa'iimman ajjeesaa jiraa?
Naayijeriyaan buufataalee dhangala'aa haftee boba'aa waggaa guutuu gadi naqan dhibbaan lakkaa'amu qabdi. Baay'een isaanii ammoo lafa qonnaa, bakka hojii fi jireenyaa irratti gadi dhiisu.
Karoorri faalama pilaastikiin garbawwanirra ga'u haalaan hir'isu, Yaa'ii Mootummoota Gamtoomanii (UN) irratti walii galteerra ga'amuu danda'a.
Barmaatni Sadaasa gaafa bultii 12 balfa funaananii gubuun naannoo qulqulleessa moo qilleensa faala?
Dhimmoonni waan akka salphaatti ilaalaman garuu jiruufi jireenya ilmaan namaa keessatti gahee olaanaa qaban baayyeetu addunyaa kanarra jira. Har'as yeroo baay'ee laastikiin jedhamuufi hanga fayyadu miidhaan isaa guddate garuu ilaaluuf jirra.
Balaan badiisa bineensootaa guddina qaamaa isaanii waliin walqabata
Beenensootni akka qurxummii, allaatii, hoosiftoota, amfiibiyaanotaa fi reppitaayilootaa qaamaan gurguddoo fi xixiqqoo ta'an carraan badiisaa isaaniii guddaa dha
Waa'een eegumsa naannoo kan isaan dhiphise dargaggoonni lama balfa irraa kalaqa addaa addaa hojjechuu jalqaban.
Keenyaa keessatti fedhiin cirrachaa, omishtoota seeraan alaa kakaasuun badiinsa sirna naannoo fi lubbuu geessisaa jira